DIIWAANKA IYO DHAQANKA DHAQANKA - Million Marayaal
DIIWAANKA IYO DHAQANKA
Faa'iidooyinka u hogaansanaanta
Waxay hubisaa go'aan la ogeysiiyay
Waxay hubisaa sii wadida ganacsiga
Waxay hubisaa dhererka
Waxay ka fogaataa dagaalada sharciga ah
Waxay ka fogaataa khasaaraha dhaqaale
Helitaan deg deg ah oo sanado khibrad ah
U hoggaansanaantayada iyo kooxaha dadaalka habboon ee Dunida waxay leedahay khibrad ballaaran oo xagga xisaabaadka, canshuuraha, dhaqaalaha iyo aragtida qiimeynta, dadaal ku habboon. Sidii oo kale oo muhiim ah, waxaan leenahay khibrad wax ku ool ah iyo savvy ganacsi oo loo baahan yahay si loo garto arrimaha shirkadda gaarka ah iyo sidoo kale heerarka u gaarka ah warshadaha oo aan qiimeynno qodobbada mowduucyada caalamiga ah ee kiciya qiyamka ganacsiga.
Waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisha iyo la-taliyayaasha si loo horumariyo ujeeddada, u hoggaansanaanta madax-bannaan iyo dadaal ku habboon oo loogu talagalay inay kaafiyaan baahiyaha macmiilka. Waxaan diyaarinaa warbixinno loogu talagalay in lagu hor istaago baarista masuuliyiinta canshuuraha, xisaabiyaha, maxkamadaha, dhexdhexaadiyeyaasha iyo qeybaha kale ee daneynaya.
Gudaha, oo leh jawiga sharciyeynta iyo caqabadaha sharciyeed iyo qawaaniinta, ganacsiyada ku lug leh howlaha dib-u-habeynta shirkadaha, Isku-imaatinka iyo Aqbalaada, Bilaabidda, mashaariicda baaxadda weyn, shaqooyinka wareejinta, dhoofinta iyo soo dejinta dhammaantood waxay la kulmayaan caqabado kaladuwan iyo is-waafajinta jidgooyooyinka iskutallaabta -badka dhaqdhaqaaqa shaqaalaha, abuurida meherad, fidinta iyo xitaa joogtaynta iyo jiritaanka. Milyaneyaasha Malaayiinta ayaa siiya hagitaan iyo taageero shirkadaha dhammaan cabbiraadda ku saabsan u hoggaansanaanta iyo dadaallada saxda ah.
Isku-darka iyo soo-iibsiga iyo Dib-u-habeynta Shirkadda
Falanqaynta inta lagu jiro mideynta iyo helitaanka, dariiqyada iyo noocyada kale ee howlaha dib-u-qaabaynta shirkadaha ayaa sida caadiga ah diiradda lagu saaraa “sawirka weyn” iyo yareynta halista maaliyadeed — inta badan iska indhatiraan aagagga muhiimka ah ee u hoggaansanaanta socdaalka. Isbadalada shirkada iyadoo aan laga fiirsaneynin saameynta laanta socdaalka waxay u horseedi kartaa dib u dhac weyn ku yimaada shaqaalaha muhiimka ah iyo guusha midowga. Million Makers ayaa ka caawineysay ganacsatada inay maraan dhinacyada socdaalka ee dhinacyada howlaha shirkadaha muddo tobanaan sano ah. Baadhitaankeena dadaalka badan waxaa ka mid ah falanqaynta xaaladda socdaalka oo dhammaystiran, go'aan ka gaarista saamaynta iyo maareynta howlaha socdaalka ee lagama maarmaanka ah.
Shirkadaha adduunka oo dhan badanaa waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaq isku mar ah oo daraasiin ah illaa boqolaal shaqaale, iyagoo soo bandhigaya caqabado kala duwan oo ku saleysan tirada shaqaalaha, doorarkooda iyo aqoonsiyadooda, iyo waddamada ku lugta leh. Waxaan si dhow kuugula shaqeyn karnaa mashruucyada si aan u siino hagitaan ku saabsan u hoggaansanaanta qawaaniinta geeddi-socodka socdaalka maxalliga ah. Annaga oo iskaashanaya, waxaan dhisan karnaa qorshooyin wax qabad oo ku saleysan mudnaantaada iyo bartilmaameedkaaga, anagoo kaa caawinayna inaad kusii socoto wadooyinka oo aad gaartid himilooyinkaaga mashruuca.